VVD (dystonia vegetative-semithambo) ingenye izifo eziningi ezikhona namuhla, nakuba namanje esikuqondayo kokubili iziguli kanye odokotela. Lapho kwezinzwa ubeka kokutshelwa ngokukhubazeka kwengane, isiguli has a umuzwa yokungathembani: kuthiwani uma udokotela uphuthelwe into? ukusabela okunjalo kuyaqondakala: iningi labantu uqiniseka ukuthi main uphawu IRR - kuyinto hypotension. Alas, akusiyo. Kubi kwegazi kungaba umphumela ezihlukahlukene ezinye izifo. Kube VSD ngohlobo okuxubile. Izimpawu zalesi sifo athé ukwehluka, Nokho, umehluko azinakwa. Lezi ubuqili Ungaqonda onguchwepheshe, into yakho efanayo - ukuze uthole kuso.
Ukuze siqale ukuqondisisa ukuthi dystonia semithambo. Empeleni, lokhu zokugula, esakhiwa kokuphazamisa umsebenzi compensatory ka autonomic nervous system (ANS). ANS itholakala emgogodleni ubuchopho, ulawula imisebenzi zonke izitho, izindlala of uketshezi ngaphakathi nangaphandle i-lymph kanye igazi izitsha, inikeza nezimo umzimba yezinguquko imvelo ephula ibhalansi phakathi nozwela futhi parasympathetic autonomic nesimiso sezinzwa.
Uyini uphawu belinganisa ka VSD?
Impendulo isobala kule mibuzo ingucha. Kunezinhlobo eziningana yalesi sifo, esekelwe kwasendaweni zezimpawu: zokuphefumula, palsy, nezenhliziyo, Gastroenterology, vegetative-visceral, a ukwephulwa of thermoregulation. Ngenxa yalesi sizathu, bathi, uphawu we IRR kuyinto juqu, kakhulu, kunzima kakhulu. Kungenzeka unomphela - kwamanyuroni, senhliziyo, engqondweni yethu, neuroendocrine, zengqondo, iparoksizmalnymi. Laba ihlukaniswe phezu VSD ku uhlobo hypotonic, hypertonic futhi edidayo.
VVD futhi ukhwaliti ubuhlungu emuva: izimpawu ziyefana izizathu?
Ukhwaliti ubuhlungu emuva, eqinisweni, - ingezinye zezinto le dystonia ayeke ukunisa vegetative sossudistuyu. ukukhuluma Cishe, lolu hlobo uphawu IRR, nakuba ukuthuthukiswa wale mithandazo akudingekile. Osteochondrosis uyakwazi zenzeka ngenxa izinyawo flat, ukukhuluphala, ukulimala, ayilungile izikhundla zokusebenza izindlu, omatilasi esithambile futhi pillows, imizwa engavezwanga ngamazwi nokucindezeleka, endocrine nokuphazamiseka hormone, ukungawuvivinyi umzimba, nokunye. D. Kodwa imbangela enkulu yalesi sifo ohamba okuqondile, ngakho-ke konke ayengakwenza yena ngasiphi yobudala. Lapho kukhona osteochondrosis ka deformity vertebral, okuyinto obungamcasula eziyimpumelelo emsipheni, okuholela imisipha spasm kanye nomsebenzi disequilibrium parasympathetic futhi izinhlelo nozwela. Ukuvimbela lesi sifo - ESP isexwayiso, kuzomele gcinani lokhu engqondweni.
Isinyathelo sokuqala ukuba ishintshe ukuphila, ukuxazulula umsebenzi aphumule, zifezeke - hhayi professional, kodwa umthwalo eyanele, ukuqeqesha ngokwakho ukulala amahora ayisishiyagalombili futhi ngidla ngendlela efanele, ungakwazi ehlukahlukene ukuphila kwakho eshaweni abandayo. Isinyathelo esilandelayo kungaba ukuqaliswa izincomo udokotela: angase akunikeze imithi futhi -profilaktornoe-spa ukwelashwa. Khumbula ukuthi IRR - ngokuyinhloko umphumela abampofu yokuphila ukukhetha, ukuyishintsha, ungakwazi ngcono isimo sakho noma ukuvimbela isifo.
Insulin - kuyini? I syndrome umzimba kuyinto insulin
Bump phezu isandla ngesikhathi esihlakaleni noma hygroma: izimpawu, izimbangela kanye zokwelapha
Ingabe izindlela ezimbili ukuthatha skrini on a Mac
Yini igama Einstein? Wayengubani Einstein?
Ukwelashwa Hemangioma futhi izimpawu zesifo